Gịnị bụ ike mbanye cloning?
Ike mbanye cloning nakwa kwuru na dị disk cloning bụ usoro ma ọ bụ na-edegharị ọdịnaya nke otu ike mbanye ọzọ site na-agbakwụnye ha ka ha ihe oyiyi faịlụ. Usoro nwekwara ike rụrụ kpọmkwem site otu mbanye ọzọ ma na-atụ aro usoro bụ iji jide n'aka na ihe ndị dị na na-akpa kwukwara na oyiyi faịlụ na mgbe ahụ na faịlụ na n'elu nke ọzọ ike mbanye. E nwere ọtụtụ ihe nke rụrụ usoro a ma ihe kasị Ugboro onye na-eji na nke a bụ archiving nzube.
Gịnị bụ ojiji nke cloning draịvụ ike?
Isi ihe mere ka kọwara tupu bụ ime ka n'aka na data a nọ nchebe na archived maka ọdịnihu ojiji. Ọ na-ebelata mgbalị na a chọrọ na-eke backups na mgbe ahụ na-eweghachiri data site na ha dị ka akụkụ nke DR atụmatụ. Ka tụnyere data ndabere siri ike mbanye mmepụta oyiri na-eri irè dị ka ọdịnaya na-depụtaghachiri na iji functionalities wuru na n'ime usoro na atọ ọzọ omume na-adịkarịghị eji na nke a. The òtù nke taa bụ ndị nke echiche na ha na-adị na a ụwa jupụtara cyber mpụ na nsogbu ndị na-metụtara malwares na nje virus. The ndị ọrụ jide mkpa data ha na kọmputa ike draịva na-atụ aro ga-esi n'ime àgwà nke ike mbanye cloning mere na mkpa ọkwọ ụgbọala na nhazi Ama anọgide enem.
Olee otú mmepụta oyiri ike mbanye?
Ndị na-esonụ bụ usoro na a ga-soro na nke a iji hụ na ọgwụgwụ N'ihi dị na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. Na-ọrụ nke usoro a na-gwara iji jide n'aka na kpọmkwem usoro a replicated zere ihe ọ bụla nke na data ọnwụ nke nwere ike na-emecha ghọọ isi na-awa n'ihi na onye ọrụ na nke a.
Niile dị mkpa data na ọmụma na-ike mbanye ga-kwadoo iji jide n'aka na data ọnwụ bụ gbochie na mmekọrita usoro a. Ọ na-emekwa mgbake mfe ma ọ bụrụ ihe ọ bụla misadventure etịbe:
Mbanye na kwesịrị a mmepụta oyiri ga-ahụ kwukwara na kọmputa akpa iji jide n'aka na usoro Ọganihu:
The data cloning software omume bụ mgbe ahụ na-arụnyere mere na cloning usoro amalite nke nwekwara ike na-ahuta ka isi nzọụkwụ nke usoro a:
Ihe kwesịrị ekwesị na nhọrọ a mgbe ahụ ka ga-ahọrọ si interface:
The isi iyi na ebe draịva a ga-ahọrọ. Ọ na-ukwuu-atụ aro iji a SATA ike mbanye dị ka a na-aga faịlụ iji jide n'aka na nnukwu free disk ohere dị na nke na-mgbe chere ihu mgbe ọ na-abịa nchekwa:
Onye ọrụ nwekwara ike nyochaa ntọala iji jide n'aka na ha bụ ndị ziri ezi na-ezi ezi. Ọ bụ uru na kwusịrị na site ebe a n'ihu ndị cloning usoro amalite na nke a nwere ike-ewere dị ka a ikpeazụ ohere iji nyochaa ntọala:
Ozugbo cloning usoro okokụre onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na imecha button na-kụrụ mere na usoro-agwụ:
Prerequisites nke cloning ike mbanye
Na-esonụ bụ ndepụta nke omume na a ga-rụrụ tupu ịmalite na cloning usoro:
A zuru data ndabere a ga-kere zere ihe ọ bụla ọnwụ nke ọ bụla faịlụ na draịvụ ike.
The cloning ga-rụrụ jidesie mpụga mbanye na nke a mbanye ga-formatted ka onwe ya ọ bụla na nje ma ọ bụ metụtara mbipụta.
Na Ọkachamara na Standard mode na doro software e kere site Wondershare, otu ụlọ ọrụ nke a maara maka ya innovations na ọkaibe software mmemme na-mgbe nile mepụtara na-eme ka n'aka na ọrụ na-pacified dị ukwuu dị ka o kwere omume. Ọ na-na--ahụ kwuru na ọkachamara mode na-enye ohere ọrụ na nke kacha mma na nke a nanị site na isoro usoro ntuziaka na ama na e agbakwunyere n'ime ya. Usoro ihe omume e mepụtara eburu n'uche GUI ie onyeōzi ọrụ interface nke na-enye ohere ọrụ iji ya ihe dị mfe na enyi na enyi n'ụzọ. Na nloghachi usoro ihe omume ana achi achi na ala nke nkà usoro na-rụrụ n'ihi na onye ọrụ nke mere na data mgbake bụ mgbe otu ihe iseokwu maka ha. Na nanị otu pịa data na-abụghị nanị natara ma ndị ọrụ na-na-na ọtụtụ ndị ọzọ nhọrọ nakwa nke hụ na dum òkè ma ọ bụ akụkụ e weghachiri eweghachi dị ka kwa onye ọrụ ọchịchọ.
> Resource> Draịvụ> Olee mmepụta oyiri draịvụ ike gị - Atụmatụ na usoro